Ihe ị ga-ahụ na Lagos, Portugal | Njem akụkọ
Mariela Carril | | Portugal, Ihe ị ga-ahụ
Portugal Ọ nwere ebe mara mma n'ihi na ha na-agwakọta akụkọ ihe mere eme na njem nlegharị anya, ngwakọta mara mma nke ukwuu mgbe ị nwere oge na ego efu iji nọrọ na ezumike. Otu n'ime ebe ndị a bụ Lagos, obodo dị na mpaghara Algarve.
Ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kacha nwee nnọkọ na nke ama ama na mba ahụ ma taa anyị ga-ahụ ihe aga eme na Lagos.
2 Ihe ị ga-ahụ na Lagos
Lagos dị na mpaghara Algarve, na mpaghara Faro. Ụmụ mmadụ mbụ biri ebe a bụ ndị cones, obodo tupu oge Rome onye biri n'etiti ndagwurugwu Guadalquivir na Cabo San Vicente. Anyị na-ekwu ihe dị ka afọ 2 BC. N'ụzọ doro anya, ndị ọzọ ga-abịa ma emechaa, dị ka ndị Carthaginians, ndị Rom, ndị mba ọzọ, emesịa ndị Alakụba, n'ikpeazụ ndị Kraịst.
oké osimiri obodo, bụ igodo na logistics nke njem oke osimiri Portuguese n’ihi ya kwa, Eze Sebastian gụrụ ya obodo n'afọ 1573. Legọs bụkwa obodo ọdụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ ụgbọ ala ndị Portuguese ji eme njem ahia na nchọpụta ha na mba ụwa ka a mụrụ ebe a. Na eziokwu dị mkpa, ọ bụ obodo Europe mbụ nwere ahịa ohu.
etiti narị afọ nke XNUMX e bibiri site na ala ọmajiji, Ala ọmajiji nke Lisbon nke 1755 na ịga n'ihu abụghị ọnụ ala. N'etiti narị afọ nke XNUMX, a malitere ụlọ ọrụ mbụ na Lagos, n'ihi ya, ọ nwere obere mgbanwe mgbe o sonyere na agha Napoleon na agha obodo Portuguese.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ na Europe, ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya mgbe njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ na njem malitere ibia ebe a choputa ima ya rue tata ka odi njem nlegharị anya ya bụ isi ọrụ akụ na ụba.
Ee, ee, Lagos na-ebikwa site n'ịkụ azụ, mana kemgbe 60, njem nlegharị anya karịrị ọrụ ọdịnala a nke maliterela ọtụtụ narị afọ. Ma ọ bụ ya Lagos nwere ihu igwe dị mma, ọmarịcha osimiri, oke osimiri mara mma, ihe nketa akụkọ ihe mere eme na ụgbọ mmiri maka ụgbọ mmiri 460., na mgbakwunye na eziokwu na ọ nwere ike ịnweta ụgbọ mmiri dị anya.
Ihe ị ga-ahụ na Lagos
Lagos dị n'akụkụ osimiri Bensafrim nke na-asọba n'oké osimiri. O nwere ọdịdị n'otu akụkụ yana ihe nketa akụkọ ihe mere eme na omenala n'akụkụ nke ọzọ. Ya mere, ka anyị malite na akụ ya na ihe ị nwere ike ime.
anyị nwere ike ịkpọ aha osimiri ise ịga ije, sunbathe na ịsa ahụ n'oké osimiri. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụgbọ ala, mgbe ahụ, mmadụ nwere ike isi n'ụsọ osimiri gaa n'ụsọ osimiri na-achọ nke kachasị mma maka ihe anyị ga-eme, mana ise ndị a. Ha bụ ndị kacha nso n'obodo ahụ, yabụ ma ị na-eji ụgbọ ala ma ọ bụ na ị bụghị, a na-enweta ha.
Meia Praia ọ bụ ya kacha ukwuu, dịkwa n'ọnụ ọnụ osimiri ahụ. Ọ ga-adị ihe dị ka kilomita ise n'ogologo ma nwee obere mkpọmkpọ ebe na ájá. Enwere àkwà mmiri ị ga-eji na-aga n'ihu ka ọ ghara imebi ahịhịa, nke nwere ike ịbụ akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ị bịarute n'ụkwụ, ị nwere ike ịgbaso ụzọ nke si n'etiti obodo ahụ pụta. Site na ụgbọ ala enwere ebe a na-adọba ụgbọala.
La Batata Beach Ọ bụ naanị nzọụkwụ ole na ole site na etiti akụkọ ihe mere eme nke Lagos, yabụ ndị na-anọ ebe a bụ ndị na-agakarị. Ya mere, ọ bụrụ na uru ya dị nso, ihe ọjọọ ya bụ na ọ na-enwekarị ọtụtụ mmadụ. Nke Beach ụmụ akwụkwọ abụọ a maara nke ọma. Ọ nwere ngalaba abụọ ejikọrọ na njiko. Enwere ike ịbanye n'akụkụ osimiri nke abụọ site na oghere dị n'otu nkume ahụ, mgbe ọ bụla mmiri dị ntakịrị ... Ọ bụ akwụkwọ ozi kacha ochie nke osimiri Lagos.
Mgbe ahụ e nwere Praia Dona Ana na Praia do Pinhao. Ejikọtara ha abụọ site n'okporo ụzọ 300 mita na ọnụ ọnụ ugwu. Praia Dona Ana nwere okwute ya na mmiri, ọ dị obosara, o nwere ebe a na-adọba ụgbọala na ụlọ dị nso, ya mere ndị bi ebe ahụ na-ahọrọ ya mgbe niile. Maka akụkụ nke ya, Praia do Pinhao dị na njedebe nke Rua José Formosinho ma gbara ya gburugburu na nkume ndị mara mma.
N'ịga n'ihu na odida obodo, ihe dị ka kilomita abụọ na ọkara site na etiti Lagos, e nwere nnukwu okpu mara mma, nke ahụ. Ponta na Piedadenke a nnukwu ebe ị ga-aga lelee ọdịda anyanwụ Ma, ọ bụrụ na ịnweghị ike, mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike ịga ije n'oge ọ bụla n'ihi na ị ga-ese foto mara mma nke oké osimiri, nhazi nkume, mbara igwe ... Ma mgbe ahụ, e nwere usoro ihe omume ị nwere ike were were were. na m chere na-ekpuchi ọtụtụ isiokwu.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ime a Western Algarve jeep safari, mee ihe ụtọ mmanya wee mata Benagil, Ferragudo na Carvoeiro, buru ụgbọ mmiri na Ponta da Piedade mgbe anyanwụ dara ma ọ bụ gaa na-ekiri dolphin.
Ugbu a, gịnị banyere omenala, akụkọ ihe mere eme na ụkpụrụ ụlọ nketa? Na Church of san antonio Ọ dị na etiti akụkọ ihe mere eme na ọ bụ ezie na ọ naghị ekwu ọtụtụ ihe site n'èzí, n'ime ya bụ oriri baroque. Ọ dị njọ na ị ga-edekọ ya na retina n'ihi na anabataghị foto. Ị ga-ahụ osisi dị mma na polychrome, taịlị na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha, ndị mmụọ ozi, osisi gilded ... ee, enwere ego ntinye. Eboroghị ya n'etiti ọrịa na-efe efe mana ọ ga-ekwe omume na ntinye akwụ ụgwọ alaghachilarị.
Ọzọ ụka bụ Churchka Santa Maria de Lagos, nke dị na nnukwu ogige obodo ahụ. E wuru ya n'etiti narị afọ nke-iri-na-ise na nke-iri-na-isi na ọ bụ ezie na ọ gbara ọkụ na narị afọ nke XNUMX na e bibiri ụfọdụ n'ime nsụgharị mbụ ya, a ka na-ahụ ya. M na-ekwu banyere ihe mkpuchi ahụ, ma ihe na-adọrọ mmasị ya dabeere na ọmarịcha ihe osise dị n'azụ ebe ịchụàjà nke na-egosi agha nke ndị mmụọ ozi.
La Infante Dom Henrique Square Ọ mara mma ma dịkwa nso n'akụkụ osimiri Besanfrim. Ọ bụ ogige mepere emepe nke ukwuu ebe ndị mmadụ na-ezukọ, na-ejegharị, na-anụ ụtọ ikuku nke oké osimiri ... Ihe oyiyi nke Dom Henrique ma ọ bụ Enrique the Navigator, bụ obi nke square ahụ, na-echeta na ọ chọpụtara, dịka ọmụmaatụ, Island of Santa María na. ndị Azores.
Anyị kwuru n'elu na Lagos bụ obodo mbụ na Europe nwere a Ahịa ohu, na n'ihi nke ahụ kpọmkwem enwere ụlọ ihe ngosi nka onye na-echeta ya. Ụlọ ihe ngosi nka nwere ala abụọ ma na-akọ akụkọ banyere ndị ohu bịara Lagos ka ha na-ere ahịa. A na-eme atụmatụ na n’agbata 1444 na afọ iri, ihe dị ka mmadụ 800 gafere. Ụlọ ahụ n’onwe ya dịkwa mma.
El Ugbo agha Ọ dị na Dom Henrique square na dị ka aha ya na-egosi, ọ bụbu ụlọ nkwakọba ihe ndị agha. Ọ naghị emeghe ndị ọbịa mana facade nke baroque, nke na-acha odo odo na ọcha, dị oke egwu. Lagos nwekwara mgbidi ma taa ị nwere ike ịhụ akụkụ ya. Ọ dị na ndịda nke Ụka Santa María ma dị na Puerta de San Gonzalo, ọnụ ụzọ obodo ahụ.
N'ezie ha abụghị mgbidi ochie kama ọ bụ ndị Rom, mgbe e mesịrị conditioned site Arab na mgbe e mesịrị, na XNUMXth narị afọ, site ndị eze Manuel I, Joao III na Felipe I. Nkebi nke a dị n'ebe ndịda, ma e nwekwara ndị ọzọ akụkụ nke mgbidi dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke akụkọ ihe mere eme center. Site na Rua do Cemitério ruo Rua da Porta da Vila. Ije ije ị nwere ike ịga n'ihu mgbidi dum wee gafee ọtụtụ ogige ntụrụndụ ka ọ bụrụ njem mara mma.
El Gọvanọ Castle ọ bụ mkpọmkpọ ebe mana ọ na-abụ akụkụ nke mgbidi ahụ. Ala ọmajiji nke Lisbon kwaturu ya mana ị nwere ike ịhụ akụkụ nke facade. N'ikpeazụ bụ Ebe e wusiri ike nke Ponta da Bandeira, chere ihu n'oké osimiri na osimiri. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX iji chebe ọdụ ụgbọ mmiri wee weghachi ya n'ụbọchị taa ọ bụ ụlọ ihe ngosi ndị metụtara ihe a na-akpọ Age of Discovery.
N'ikpeazụ, gafere ebe ndị a kpọmkwem, ihe kacha mma ime bụ ịga ije, ịgagharị, na-efunahụ n'okporo ámá nkume ya, hụ ụlọ ya mara mma, ogige ya nke nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya na n'ezie, gaa njem. ahịa obodo Ọ na-amalite site na Mọnde ruo ụtụtụ Satọde. Ọ dị n'ihu Marina ma juputara na ụlọ ahịa azụ na azụ azụ, mkpụrụ osisi na ngwaahịa ndị a na-ahụkarị. Na n'ala nke atọ ị nwere ọmarịcha teres. Ụlọ ahụ sitere na '20s nke narị afọ nke XNUMX, emezigharịrị ya, na steepụ elu ya e tiwere akwa bụ ọrụ nka.
Osimiri, ije, mmanya, mmụọ, ọdịda anyanwụ agaghị echefu echefu... ihe a niile bụ Lagos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Portugal » Ihe ị ga-ahụ na Lagos, Portugal